Utitshala otyholwa ngokudlwengula umfundi uzakuphinde avele enkundleni – Elitsha
23rd May 2018 Phinda KulaEzemfundo, Iyavela, Uncategorised 0 Xhosa
Abafundi baye baqhankqalaza ngexesha kuvela indaba zodlwengulo lomfundi ngumfundisi-ntsapho. Umfanekiso uthathwe ngu Phinda Kula
Limisiwe ityala lomfundisi-ntsapho wase Qhayiya otyholwa ngoku dlwengula nokukhomba ngompu umfundi wesi sikolo.
Isebe lezemfundo eNtshona-Koloni liqhubela phambili namalungiselelo okuthatha amanyathelo kwizityholo zodlwengulo ezityatyekwa umfundisi-ntsapho kwisikolo samabanga aphakamileyo iQhayiya kwililokishi yaseZwelihle eHermanus. “Silisebe silindele nje ukuba akhululwe ngebheyile sikwazi ukuqhuba uphando ngakwizityholo ajamelene nazo” utshilo usomlomo kwisebe lemfundo kweliphondo unkosikazi uBronagh Hammond.
Letishala kulindeleke ukuba ibhotise kwakho phambi kwenkundla kamantyi eHermanus ngoLwesibi waleveki izayo umhla wamashumi amabini anethoba kule iphezulu nalapho kulindeleke ukuba ifake kwakho isicelo sebheyile. Kungokunje uselugcinweni lwamapolisa sukela ukubanjwa kwakhe emva kwesisiganeko kwinyanga ephelileyo. Umtyholwa unamashumi amane anesihlanu eminyaka ubudala logama ixhoba lineshumi elinesibhozo leminyaka ubudala. Kudizwa ukuba umtyholwa waxhwila lentwazana waze wayidlwengula ze kamva wayikhomba ngomkhonwekati.
Abafundi bavakalisa uloyiko ngezizityholo ngelithi oku kubangela ukuba baphile ubom bentshontsho kuba oku akuqali ukwehla kwesisikolo betyhola ukuba iziganeko ezikumila kunje zazikho kwityeli elingaphambili kodwa akukho bani waziyo ukuba zaphelela phi.
Okuvela kwezizityholo kwabangela ukuba imeko ingabintle kwesisikolo nekwakhokelela abazali ukuba benze imigushuzo phambi kwesikolo ngelivakalisa ukuba bafuna abantwana babo bakhuseleke xa bekwiziko lemfundo bafunde bengenamaxhala nanjengoko sele zisemnyango iimviwo zesiqigatha sonyaka.
Kananjalo isebe lithi liqhuba uphando kumarhe agcwele kumaqonga ezonxibelelwano malunga nokuzibandakanya zabafundisi-ntsapho, nkqu nenqununu kwiziganeko zokuncuma nabafundi. Isebe lithi kusekutsha kwesi sigaba ukuba lingaphefumla kwezizityholo. OkaHammond uthi isebe liyaqhuba ukunikezela ngenkxaso kwixhoba kuquka unyango lokuzama ukunyanga umphefumlo odandathekileyo.
Also read: Baqhanqalazela ukungabinambane abahlali base Strand
Inkundla kamantyi yase Hermanus
Ootitshala abathandana nabafundi
Ukudlwengulwa kwabafundi ngootitshala
Urhulumente udilize izindlu kwindawo yogobityholo